mercredi, 21 octobre 2015 18:43
Anosiarivo Ambodifasina : Atao varoboba ny entan’ny tantsaha
Amidy 50 Ariary ny singana laisoa iray eny amin’ny tsenan’Ivato – Ambohidratrimo rehefa tolaka ny andro. Izay hatrany no iainan’ny tantsaha avy any Anosiarivo Ambodifasina mitondra ny vokany hamidy ao amin’ity tsena ity. Tsy misy mpividy ny entana, mbola andoavana sarandalana indray anefa raha entina miverina, hany ka mampitombo masonkarena, dia ny fanaovana azy varoboba no vahaolana hitan'izy ireo sitrany ahay.
mercredi, 21 octobre 2015 18:42
Taratasin'ny mpamaky: Fanaovana taratasy Morondava
Mitaraina ny fianakaviana iray izay monina aty Antananarivo, fa maty tamin’ny taona 2014 ny renin’izy ireo Razafindrafara Genevieve, izay mpiasam-panjakana nanompo ny fanjakana nadritra ny 30 taona mahery, ary tao Morondava no poste-ny farany. Namela zaza iray mbola tsy ampy taona io vehivavy io. Rehefa nokarakarain'ny secours de Decès, sy pension d’orphelinat ho an’ilay zanaka navelany dia mbola tsy misy valiny foana efa ho roa taona latsaka taty aoriana nametrahana ilay dossier. Efa ho iray taona no nikarakarana ny dossier tao amin’ny Cisco Mahabo sy Dren Menabe vao lasa tany amin’ny finance Morondava ilay dossier. Tafapetraka soa aman-tsara tao amin’ny finance Morondava ilay dossier tamin’ny 20 janvier 2015 ary mbola tsy misy valiny foana efa 10 volana aty aoriana. Voatery nidina tany Morondava ny tompon’ilay dossier ny voalohandohan’ny volana oktobra teo ary nilaza ny tao amin’ny finance Morondava fa tsy misy an’izany dossier izany nandalo tao amin’ny finance Morondava. Rehefa nidrikina anefa ny tompon’ilay dossier, dia nanaiky nitady ihany ireo mpiasan’ny finance ao Morondava, ka hita ihany ny boky misy ny reference nandraisandry zareo ilay dossier. Rehefa nojerena ilay cahier de transmission dia 20 febroary 2015 no voasoratra ao, kanefa dia misy porofo mazava tsara fa naterina tao ny 20 janoary 2015 io dossier io. Izany hoe napetraka teo amin’ny reception finance Morondava ilay dossier ary iray volana aty aoriana vao voarain’ny birao mikarakara azy ao amin’ny finance Morondava ihany. Notadiavina amin’izay ireo dossiers ireo kay tsara pirina ao anaty placard ny dossier momba ny pension. Ilay dossier momba ny secours Décès kosa lazain-dry zareo fa efa lasa any Toliara tamin’ny 10 jolay 2015 ka mila jerena ao amin’ny bureau Solde ao Toliara. Nomen’ilay mpiasan’ny finance référence mihitsy ilay tompon’ny dossier ka B.E 115 du 10/07/2015 no anarahana ilay dossier secours Decès any Toliara. Voatery nandeha nankany Toliara indray ny solontenan’ny fianakaviana hanaraka ilay dossier sy hijery azy. Efa ohatrinona izay ny vola lany ?. Nony tonga tao amin’ny birao solde ny solontenan’ny fianakaviana dia milaza ilay tompon’andrakitra ao Toliara fa tsy misy izany dossier izany ao. Natao ny fikarohana ka hany herin’ny solontenan’ny fianakaviana dia niverina nody aty Antananarivo namonjy ny asany. Tsy fantatra eto na ny finance Morondava no tsy nandefa na ny finance ao Toliara no nanary ilay dossier. Ny azo antoka dia tsy manao ny asany ny mpiasan’ny finance Morondava sy Toliara satria telo volana taorian’ny nialan’ny dossier tany Morondava dia mbola tsy tonga any Toliara foana hoy izy ireo ilay dossier. Raha ny torohevitra nomen’ny mpiasan’ny finance ao Toliara dia hoe mametraha dossier vaovao indray any Morondava dia mahazo référence vaovao dia iny no andrasana any Toliara. Izany hoe raha manaraka ny tantara tetsy aloha dia mila 10 volana fanampiny indray izany vao ho vita izay rehetra izay. Marihina fa tena nisafidy ny hanaraka ny lalana ara-dalàna ny fianakaviana rehefa nikarakara io dossier io fa tsy nanisi-bola tamin’ireo mpikarakara, ka asa na izany no antony tena mampalaina ireo mpiasam-panjakana hanao azy ity. Efa ho roa taona latsaka izay no nikarakarana io dossier io fa dia mbola tsy hita foana ny marina aminy. Koa dia miantso ny Minisitry ny Finance, ny Praiminisitra Jean Ravelonarivo, ny Filohan’ny Repoblika ary ny Bianco mba hanara-maso marina ny asam-panjakana fa izao no tena iainan’ny vahoaka rehefa mikarakara taratasim-panjakana. Izao no atao hoe lenteur de service. Ianao Andriamatoa minisitry ny finance, ao amin’ny departemantanao no misy ity raharaha ity ka dia ampahafantarina anao fa tsy miasa ireo olonao any Morondava sy Toliara ka mila fanadiovana. Ianao andriamatoa Praiminisitra Jean Ravelonarivo, izay nilaza ny 28 janoary 2015 fa tsy maintsy 72 ora dia ho vita ny fikarakarana taratasim-panjakana ary 7 andro farafaha elany dia tokony ho vita sonia ny taratasy rehetra mila izany ao amin’ny administration, ampahafantarinay anao fa izao no iainanay vahoaka madinika. Ianao Andriamatoa Filohan’ny Repoblika, izao no iainan’ny vahoaka izay tarihinao, ankoatry ny delestazy sy ny tsy fandriampahalemana. Izao filohan’ny asam-panjakana toy izao ve no nifidianan’ny vahoaka anao?
vendredi, 16 octobre 2015 13:11
Vaksiny fanefitry ny lefakozatra : Arian’ny mpanao vaksiny fotsiny ny ranom-baksiny
Mbola lavitra ny ezaka ho an’i Madagasikara amin’ny famongorana ny lefakozatra na polio. Ny atao hoe tsy misy intsony amin'ny fitsaboana dia tsy hoe tsy misy trangana lefakozatra intsony, fa mety misy any ho any saingy tsy atahorana hahatonga valanaretina. Tokony efa tsy misy polio intsony eto Madagasikara, hoy ny mpitsabo sendra ny Sobika, fa ny olana eto Madagasika dia ny politikan’ny fahasalamana. Ny ministeran’ny fahasalamana dia velona na mivelona amin'ny fanampian’ireo mpamatsy vola, hiadiana amin’ny tazomoka, lefakozatra, tiberkilaozy, habokana, Vih/Sida, …
vendredi, 16 octobre 2015 09:21
Fantaro zahay bôka Antsohihy
Antsohihy dia latsaka ampovoany, andalovan'izay hianavaratra, fa eo koa ireo izay hiankandrefa sy antigniana. Maro olo mpihavy vokatr'izay, ary mahay mifanerasera amin'olo jiaby. Aminay aty werawera, koa efa misy raha mandalo, malaky vory ny olo mizaha. TR hozy mabôto reo (Tia Raha). Ndreo bazary aminay aty, somary mbola misavoritaka, fa mandamina azy zahay io. Efa masaka ny manga aty amin'ny RN6, manga diego na manga tombato, mbola tsy dia mamy loatra satria mbola tsy latsaka ny mahalegny izay tegna antony maha masaka azy sy maha mamy azy, ka na dia izany aza itondraso voandalagna ny havagna sy ny namagna raha mandalo aminay aty nareo ee.Mandeha par pieces vidiny, 300 ar, 200 ar, 100 ar arakaraka ny halebiazany. Ireo koa ny toby fiantsonan'ny taxi brousse na gare routiere na parkage ahaizanay azy eto Antsohihy renivohitry ny faritra Sofia, efa tsy manarapenitra sy efa tsy mifanaraka amin'ny hamaroan'ny fiara sy ny fivoarana satria raha avy ny mahalegny dia anaty fotaka na gôdra tanteraka ny olona sy ny fiara. Ireto avy saran-dalana, na pasazy hoy fiteninay azy aty, izay miainga avy eto Antsohihy: - Antsohihy - Tana 40 000 ar- Antsohihy - Mahajanga 20 000 ar- Antsohihy - Antsiranana 35 000 ar- Antsohihy - Mampikony 15 000 ar- Antsohihy - Port-Bergé 10 000 ar- Antsohihy - Ambanja 15 000 ar- Antsohihy - Bealanana 15 000 ar- Antsohihy - Befandriana 10 000 ar- Antsohihy - Mandritsara 20 000 ar- Antsohihy - Analalava 15 000 ar fa misy vedette mandeha koa. Izay aloha ny vaovao niany fa afara koa mitrôtro ein.Ny Havanareo aty Antsohihy mihezaka mameno vaovao agnaty Sobika na panier na tanty bazary hoy zahay aty zay.
mercredi, 14 octobre 2015 15:03
Raharaha Androhibe Finoana : Ady tany
Mitarika olona tsy hanara-dalàna sy manendrikendrika ny mpino loterana ny Solombavambahoaka Naivo Raolidina, Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy ao amin’ny faritra faha dimy hoy ireo mpivavaka ao amin’ny fiangonana Androhibe Finoana , izay naheno ny fanazavana nomen’ity Solombavambahoaka tao amin’ny radio tsy miankina iray momba ny nahazahoan’io fiangonana io ny tanim-panjakana eny Androhibe.
mercredi, 14 octobre 2015 12:11
Fankalazana ny 14 oktobra
Tonga aty Antsohihy ny député Jao Jean, izay sady Filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena, nitaona ireo vahoakany amin'ilay fikambanana vao naoriny MAKALOMBO dia nizotra niaraka fiara marobe nandeha any Anahidrano, misy ny tranon'i Filoha teo aloha Philibert Tsiranana, hankalaza ny fety 14 oktobra.